Indonesia :Qof Looga Shakisnaa Dilka Kim Jong-Nam Oo "Layaabay" In Durba La Sii Daayay
Monday June, 17 2019 - 02:38:28
Wednesday March 13, 2019 - 11:12:21 in by salman abdi
Indonesia :Qof Looga Shakisnaa Dilka Kim Jong-Nam Oo "Layaabay" In Durba La Sii Daayay Haweenay dalka Indonesia u dhalatay oo la sii daayay iyadoo ku eedaysnayd in ay dishay wiil ay walaalo yihiin hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay "in ay layaab ku noqotay" markay ogaatay in la sii daynayo.
Siti Aisyah ayaa lagu eedeeyay in ay Kim Jong-nam wajiga ka marisay kiimikada VX loo yaqaanno ee neerfaha waxyeesha, isga oo maraya garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur.
Waraysi ay siisay BBC ayay ku sheegtay in ay mar ku fikirtay "arrintani ma noloshaada dhammaadkeedii baa"
Waxay ku celisay in aysan qayb ka ahayn dilkii Kim ee sannadkii 2017kii.
Aisyah ayaa diiday in ay faahfaahin ka sii bixiso markii la waydiiyay qaabkii loo shaqaalaysiistay iyo xogta ku saabsan raggii shaqaalaysiistay.
Gabadhan iyo Doan Thi Huong oo reer Vietnam ah ayaa diiday dilka lagu eedeeyay waxayna sheegeen in ay la noqotay in ka qaybqaadanayeen barnaamij TV oo shactiro ah.
"Marnaba isma oran marxalad intaas la eg ayaa madaxa laguu galin" ayay tiri Aisyah oo la hadashay laanta Indonesian-ka ee BBC, maalin ka dib markii la sii daayay.
"Markii u horraysay qaadan waa bay igu noqotay, waana rumaysan waayay," ayay tiri markii la sii daayay, waxayse intaas ku dartay in ay faraxsan tahay."
Aisyah oo ka shaqaynaysay Malaysia tan iyo sannadkii 2015 ayaa sheegtay in ay mararka qaar Huong ku arki jirtay xabsiga, balse aysan marnaba isla soo qaadin dilka.
"Mararka qaarkood toddobaadkii halmar ayaan qolalka ka soo bixi jirnay oon ku dhex lugayn jirnay xabsiga gudahiisa. Waan kulanay waxaana waydiiyay sideed tahay? Salaam kali ah unbayna iga ahayd."
Sii daynteedu kama dhigna in wax dambi ah lagu waayay. Haddii dil lagu heli lahaana waxay u badan tahay in ay mudan lahayd xukun dil ah.
Aisyah ayaa hadda doonaysa in ay nasato, mana jiro qorshe ay dib ugu laabanayso Malaysia, waxayna intaas ku dartay in ay rajaynayso in Huong sida ugu dhakhso badan loo sii daayo.
Ra'iisulwasaaraga Malaysia Mahathir Mohamad ayaa sheegay in go'aanka lagu fasaxay gabadhan uu waafaqsan yahay sharciga dalka".
Waxaa jira sharci ogol in lala laaban karo dacwadaha qof loo haysto. Arrintaas ayaana dhacday. Ma garanayo faahfaahinta sababta arrintaasi ku dhacday," ayuu ku yiri saxafiyiinta.
Wuxuu sheegay in uusan ka warhayn wax wadahadal ah oo dhex maray Indonesia iyo Malaysia oo dacwaddan ku saabsan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP.
Maxay arrintan uga dhigan tahay dacwaddii dilka ee socotay?
Ka dib bilooyin dib loo dhigay qaybtii is difaacidda ugu danbayn waxay ahayd in ay billaabato Isniinta, iyadoo qirasho samaynayso Huong.
Sikastaba ahaatee dacwad oogihii gacanta ku hayay baaritaanka dilka ayaa codsaday in uu ka laabto dacwadihii uu u haystay Siti Aisyah isaga oo aan wax sabab ah sheegin.
Dacwaddii Huong ayaa sidoo kale dib loo dhigay ka dib dalab ka yimid qareenkeeda.
Sidee dilku u dhacay?
Dilkan aan lala xidaaraysan ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ayaa layaab ku noqday dadka ka faallooda arrimaha noocaas oo kale ah, ciwaannada warbaahinta adduunka ayuuna qabsaday.
Kim Jong-nam oo ah wiil ay walaalo yihiin Kim Jong-un oo dibad joog ahaa ayaa sugayay diyaarad uu ka raaci lahaa Kuala Lumpur oo ku sii jeeday Macau taariikhdu markay ahayd 13 Feebaraayo sannadkii 2017kii. Isaga oo fadhiya qaybta diyaaradda lagu sugo marka waaxda socdaalka la dhaafo ayayna labo dumar ah soo qaabileen.
Muuqaal laga helay kaameerooyinka ammaanka loo adeegsado ayaa muujiyay mid ka mid ah dumarka oo indhaha qabanaysa Jong-un, ka dibna ay labadii dumarka ahaa meesha ka sii socdaan
Kim ayaa geeriyooday intii isbitaalka loo sii waday, ka dibna waxaa la ogaaday in lagu sumeeyay sunta halista ah ee VX ee neerfaha waxyeesha.
Kuuriyada Waqooyi ayaa si adag u diiday in ay ku lug lahayd dilka. Balse afar ruux oo Kuuriyada Waqooyi u dhashay oo Malaysia ka firxaday isla maalintii dilkaasi dhacay ayaa lagu soo oogay dacwado dilka la xiriira.
Raggaas ayaa wali la la'yahay in kastoo booliiska adduunka ee Interpol uu soo saaray waraaqdii lagu xiri lahaa.
Maxay isku difaacayaan haweenkan?
Labada dumarka aha ayaa sheegay in aysan wax dambi ah lahayn balse ay bartanka u galeen shilqool ay soo maleegtay Kuuriyada Waqooyi.
Qareennadoodu sida ay sheegeen, maalmihii ka horreeyay dilka Kim ayaa lacag la siiyay si ay uga qayb qaataan barnaamij shactiro ah, iyaga oo dareere marin doona dad ku sugan garoommo diyaaradeed, huteello iyo suuqaqa waawayn ee laga dukaamaysto.
Waxay sheegeen in ay u qaateen in ay ka qaybqaadanayeen shactiro garoonka dhexdiisa lagu samaynayo.
Qareennadooda ayaa sheegay in ay ku kalsoon yihiin in maxkamaddu ay ku qanci doonto in gabdhuhu aysan xisaabtaba ugu jirin dilka Kim.
Maxaa xal looga la'yahay muranka dhulka ee Muqdisho?
Laascaanood: Daawo Sidii looga Ciiday Magaalada Laascaanood
04/06/2019 - 17:54:51
Caynaba: Daawo Caynaba Sidee Looga Tukaday Salaada Ciidul Fidriga
04/06/2019 - 17:46:12
SanaagL Daawo Magaalada Ceerigaabo Oo Si Wayn Looga Ciiday
04/06/2019 - 17:45:55
Caalamka: Daawo Qaabka Dunida Muslimka Looga Tukaday Salaadda Ciidal Fitriga
04/06/2019 - 17:42:41
Shacabka Magaalada Burco Oo Maanta Si Balaadhan Looga Tukaday Saalada Ciidul Fadriga Iyo Masuuliyiin Kala Qayb Galay.
04/06/2019 - 14:15:59
Qaab Noocee Ah Ayaa Looga Tukaday Salaada Ciidil Fidriga Magaalada Muqdisho.
04/06/2019 - 13:26:34
Magaalada Berbera Oo Siweyn Looga Oogay TUKASHADA Salaada Ciidul Fidriga
04/06/2019 - 13:21:02
Magaalada Caynaba Oo Si Balaadhan Looga Tukaday Salaada Ciidul Fidriga +Dareeka Shacabka Munaasibada Ciidul Fidriga
04/06/2019 - 12:59:06